Hubi Kiisaska Dembiyada ee Kahor Dubai Intaadan U Safrin Imaaraadka | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Hubi Kiisaska Dambiyada ee Kahor Dubai Inta U Safrin UAE
Ma waxaa lagaa doonayaa UAE
Waxaa jira laba qaybood oo garsoor oo ka jira gudaha UAE, kuwaas oo kala ah: garsoorka maxalliga ah iyo garsoorka federaalka. Qaab dhismeedka sharciga ee dalka wuxuu ku adag yahay labada maxkamadood, maxkamadaha madaniga ah ee ka shaqeeya maxkamadaha iyo maxkamada shareecada. Dhammaantood waxay ka hadlayaan arrimo sharci oo kaladuwan.
Emirate kasta wuxuu leeyahay maxkamad federaali ah oo u gaar ah
Waa lagu xidhi karaa
Qareenka aad shaqaaleysiiso wuxuu sameyn doonaa baaritaan buuxa
Tan waxaa lagu cadeeyay qodobka 104 ee dastuurka in mas'uuliyiinta garsoorka maxalliga ah ee safaaraduhu ay la xisaabtami doonaan dhammaan howlaha garsoorka iyo arrimaha aan dastuurka u xilsaarin ama u xilsaarin garsoorka federaalka. Sidaas awgeed, dhammaan arrimaha garsoorka waxay hoos imaanayaan xukunka masuuliyiinta maxalliga ah ee safaarad kasta, oo aan hoos imaanin mas'uuliyiinta garsoorka qaranka.
Awoodda maxkamadaha federaalka
Qodobka 105 ee dastuurka wuxuu ogolyahay in lagu wareejiyo dhamaan ama qeyb kamid ah awoodaha garsoorka maxkamadaha fadaraalka iyadoo loo cuskanayo sharciga fadaraalka markii la codsado imaaraadka. Dambiyada, arrimaha madaniga iyo ganacsiga loo oggol yahay in loo gudbiyo maxkamada rafcaanka ee federaalka waxaa qeexaya sharci federaal ah oo go'aannadiisu kama dambeys yahay.
Imaaraatka, tusaale ahaan, Imaaraad kasta waxay leedahay maxkamad federaali ah oo u gaar ah inkasta oo Ras al Khaimah iyo Dubai ay leeyihiin qaab dhismeedkooda garsoorka.
Muxuu adiga kuu yahay haddii aad rabto in aad baarto kiisaska dambiyada ee ka jira Dubai ama UAE?
Looma baahna in deyn bixiyuhu inuu ku fayl gareeyo kiiska booliiska deegaanka aad degan tahay ama isla Emirate gudaheeda. Marka, haddii aad ku nooshahay magaalada Dubia ama aad ahaan jirtay mid ka mid ah oo aad rajaynaysay in bangiga ama deyn bixiyuhu kiis ku fayl gareeyo mid ka mid saldhigyada booliiska ee Emirate, yaab aad u weyn ayaa laga yaabaa inay ku sugto adiga sidaa darteed waxaa fiican inaad fiiriso bilayska ka hor intaysan xitaa gelin Imaaraatka.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho lambarka kaarka ah ee Aqoonsigaaga Imaamka
Hada waa suurta gal in dadka degani ay ogaadaan oo ay ka hubiyaan khadka tooska ah hadii ay waligood haystaan ​​kiis dhaqaale oo laga diiwaangaliyay kaliya Dubai oo aan ansax aheyn Imaaraatka intiisa kale. Booliiska Dubai waxay bixiyaan adeeg internet oo bilaash ah kaas oo u oggolaanaya dadka deggan UAE haddii laga mamnuuco safarka iyaga oo u sabab ah arrimo dhaqaale oo keli ah Emirate-ka Dubai.
Kala soo bax barnaamijka 'Police Police Dubai' ee laga heli karo Google Play
Markii aad adeegsaneyso adeeggan, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad gasho lambarka kaarka ah ee Aqoonsigaaga Imaamyada oo aad marin u hesho lambarka moobiilka ee laga diiwaan galiyay ID-gaaga Imaaraad. Markaad gasho lambarka UID, adoo adeegsanaya, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso naftaada lambarka OTP ee loo diri doono lambarkaaga moobiilka. Si aad uga faa'iideysato adeeggan, kaliya tag bogga rasmiga ah ee Booliiska Dubai ama soo degso barnaamijka 'Bilayska Dubai' ee laga heli karo Google Play iyo iTunes.
Hubinta Xaaladda Kiiska Booliiska ee Abu Dhabi Online
Waaxda Caddaaladda ee Abu Dhabi sidoo kale waxay leedahay adeeg internet oo u gaar ah oo u oggolaanaya dadka deggan Abu Dhabi inay hubiyaan haddii Xeer Ilaalinta ay codsatay sheegashooyinka laga gudbiyay. Si loo isticmaalo adeeggan, dalbaduhu waa inuu galo lambarka aqoonsiga amiirka oo sidoo kale waa inuu helaa lambarka moobiilka ee ka diiwaangashan ka dhanka ah aqoonsigiisa Imaaraatka.
Hubinta haddii aad leedahay Booliiska oo jooga Sharjah iyo Imaaraatka kale
In kasta oo nidaam qadka tooska ah aan laga heli karin Imaaraatka kale, doorashada ugu waxqabadka badan ayaa ah inaad siiso awood qareen saaxiib ama qaraabo kuu dhaw ama aad qareen qabsato. Lacala haddii aad horey u joogtid Imaaraadka, booliisku waxay kaa codsanayaan inaad shaqsi ahaan timaadid. Hadaadan joogin wadanka, waa inaad heshaa POA (awooda qareenka) oo uu cadeeyo safaarada wadankaaga UAE. Wasaaradda Arimaha Dibadda ee UAE waa inay sidoo kale cadeysaa tarjumaadda Carabiga POA.
Waxaan wali hubin karnaa kiisaska dambiyada ama xayiraadda safarka ee UAE iyada oo aan lahayn safaarad id, fadlan nala soo xiriir.
Xayiraadda Safarka UAE iyo Adeegga Hubinta Xiritaanka Xadhiga
Waa muhiim in lala shaqeeyo qareen kaasoo sameyn doona baaritaan dhameystiran oo ku saabsan ruqsadda soo xiritaanka iyo xayiraadda safarka ee lagaa xayiray Imaaraadka. Dhamaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah waa in la soo gudbiyaa natiijooyinka jeeggidanna waa la heli karaa iyada oo aan loo baahnayn in shaqsi ahaan loo booqdo masuuliyiinta dawladda Imaaraatka.
Qareenka aad shaqaaleysiiso wuxuu sameyn doonaa baaritaan buuxa oo la xiriira mas'uuliyiinta dowladda UAE si loo ogaado haddii uu jiro amar qabasho ama xayiraad safar oo lagaa xayiray. Waxaad hadda badbaadin kartaa lacagtaada iyo waqtigaaga adigoo ka fogaanaya halista suurtagalka ah ee lagu xiri karo ama laguu diido inaad ka baxdo ama aad gasho UAE inta aad safarka ku jirto ama haddii ay jirto xayiraad garoonka diyaaradaha ee UAE. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku gudbiso dukumiintiyada lagama maarmaanka ah khadka tooska ah maalmo gudahood, waxaad ku heli doontaa natiijada baaritaanka jeegga adoo isticmaalaya emaylka.
Dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah sameynta baaritaanka ama hubinta kiisaska dambiyada ee ka jira Dubai mamnuucista safarka waxaa ka mid ah nuqullo midab cad leh oo soo socda:
Baasaboor sharci ah
Ogolaanshaha deganaanshaha ama bogga fiisaha deggenaanshaha ee ugu dambeeyay
Baasaaboor dhicisoobay haddii uu ku yaal shaambada fiisahaaga deganaanshaha
Shaambadda bixitaanka ugu cusub haddii ay jiraan
Aqoonsiga Imaaraadku haddii ay jiraan
Waad ka faa'iideysan kartaa adeeggan haddii aad u baahatid inaad u safarto, u aado, kana timaado Imaaraatka oo aad rabto inaad hubiso inaadan liis garayn.
Maxaa kujira Adeeggu?
Talo guud - Haddii magacaaga lagu daro liiska madow, qareenka wuxuu ku siin karaa talo guud talaabooyinka xiga ee lagama maarmaanka u ah la tacaalida xaaladda.
Jeeg dhammaystiran - Qareenka wuxuu la socodsiin doonaa mas'uuliyiinta dowladda ee xiriirka la leh amar maxkamadeed oo lagu xiri karo iyo xayiraadda safarka ee lagaa xayiray Imaaraadka.
Privacy - Faahfaahinta shaqsiyadeed ee aad la wadaagto iyo dhammaan waxyaabaha aad kala hadasho qareenkaaga waxay hoos imaan doonaan ilaalinta mudnaanta qareenka iyo macmiilka.
Warbixinta emaylka - Waxaad natiijada baaritaanka ka heli doontaa e-mayl qareenkaaga. Natiijooyinka ayaa tilmaami doona haddii aad haysato amar-bixin / ganaax ama aadan haysan.
Qaadista xayiraada - Garyaqaanku ma qabanayo howlaha magacaaga laga saaro xayiraadda ama qaadida xayiraada.
Sababaha ogalaanshaha / mamnuucista - Qareenka ma baari doono ama ku siin maayo macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan sababaha dalabkaaga ama xayiraaddaada haddii ay jirto.
Awoodda Qareenka - Waxa jira xaalado marka aad u baahan tahay inaad siiso Qareenka Awoodda qareenka si uu u sameeyo jeegga. Haddii ay sidaas tahay, qareenka ayaa kuu sheegi doona oo kaala talin doona sida loo soo saaray. Halkan, waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato dhammaan kharashyada ku habboon oo waliba si gaar ah ayaa loo dejinayaa.
Ballanqaad natiijooyinka - Waxa jira wakhtiyo aanay masuuliyiintu shaaca ka qaadin macluumaadka ku saabsan liiska dadka madow ee la sheegayo sababo nabadgelyo awgood. Natiijada jeeggu waxay ku xirnaan doontaa xaaladaada gaarka ah mana jiro wax dammaanad qaad ah oo arintaas ku saabsan.
Shaqo dheeri ah - Adeegyada sharciga ee dhaafsan jeegga kor lagu sharaxay waxay u baahan yihiin heshiis ka duwan.
Hal-abuur cusub, Waxqabadka iyo Hal-abuur Hal-abuur leh
Ku xiriir qareennada saxda ah si dhakhso leh oo qarsoodi ah